राष्ट्रपति निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवले कसरी गरेका रहेछन राजनीतिक घात ?
राष्ट्रपति निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव कसरी गरेका रहेछन राजनीतिक घात ?
यो खेलका पछाडि अन्तराष्ट्रिय चासो कस्तो थियो ?
–जेपी गुप्ताको खुलासा
हिमाली क्षेत्रको मौसम जस्तै नेपालको राजनीतिक संरचनाहरु पनि निकै चाँडो र अप्रत्याशित रुपमा फेरबदल भइरहन्छन् । कतिपय घटना फेरबदलपछि गुपचुप हुने गरेका छन् भने कुनैले लामो समयसम्म बहश गराउने गरेको छ । त्यसमध्ये ६ बर्षअघि भएको राष्ट्रपति निर्वाचनले अहिलेसम्म पनि उत्तीकै चर्चा पाउँछ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको संरचनाबारे सतही टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला हाम्रा नेपाल संवाददाता डिपी शर्माले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला समिकरण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रभावशाली नेता जेपी गुप्तासँग भेटेर यथार्थ तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । पढौँ, गुप्ताकै शब्दमा राष्ट्रपति निर्वाचन बखत रातारात भएका फेरबदलका घटना र पात्रहरुको भूमिका ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपति चयन गर्नेको छलफल चल्ने वित्तिकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम राष्ट्रपतिको रुपमा निकै जोडतोडका साथ आए । र माधबकुमार नेपालको नाम पनि त्यत्तिकै आयो । त्यतिखेरसम्म मधेसी केन्द्रित दलहरु कसका पक्षमा उभिने भन्ने स्पष्ट निर्णयमा पुगेका थिएनन् । नेकपा माओवादीले कोईराला र नेपाल दुवै चर्चाका उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्दै गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको रुपमा अघि सारेपछि राजनीतिले १ सय ८० डिग्रीको दिशा लियो । सुरुमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको मोर्चा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माओवादी उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वीकार्ने र उनकै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय ग¥यो । रामराजाप्रसाद सिंहलाई माओवादीको उम्मेदवारको रुपमा भन्दा आफुले चाहेको उम्मेदवारको रुपमा त्यतिखेर मधेसी दलहरुले लिएका थिए ।
माओवादीले रामराजाको नाम अघि सार्दा सबैभन्दा पहिले मधेसी दलहरुमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उत्साहित हुँदै मधेस आन्दोलनले चाहेको उम्मेदवार भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर केहि दिनमै राजनीति १ सय ८० डिग्रीको कोणमा पुग्यो । उपेन्द्र यादवलाई कहिँ कतैवाट प्रभावमा पारियो र उनी सम्पूर्ण मधेसी पार्टीले रामराजालाई समर्थन गर्ने निर्णय उल्ट्याउँदै कांग्रेस एमालेको मोर्चामा पुगे । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको राजनितीक समिकरणको ब्याख्या गर्दै नेता गुप्ता भन्छन्, ‘‘मोर्चामा भएको सहमति विपरित उपेन्द्र यादव कसैको प्रभावमा परेकै कारण रामराजाप्रसाद सिंह राष्ट्रपति बन्न सकेनन् । र त्यहि अपवित्र गठबन्धनकै कारण रामवरण यादवको राष्ट्रपतिको रुपमा भाग्य मौलायो । उपेन्द्र यादवको यो आफैँमा स्वतन्त्र निर्णय थिएन र यसैको दुस्प्रभावले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मधेसी पार्टीहरुको मत विभाजित भयो ।
उपराष्ट्रपतिमा बार्गेनिङ्ग भएकै होईन
माओवादीलाई राष्ट्रपति भएपछि मधेसी दलहरुले उपराष्ट्रपतिमा आफ्नो दावी गरेको र उपराष्ट्रपतिमा पनि माओवादीले शान्ता श्रेष्ठलाई अघि सारेपछि मधेसी दलहरु भड्केको धेरैको बुझाई छ । यसलाई प्रष्ट पार्दै नेता गुप्ताले भने, ‘‘बहिर हल्ला भएजस्तो उपराष्ट्रपतिमा कुरा नमिलेको भन्ने कुरा झुट हो । मधेसी मोर्चाले रामराजालाई माओवादीको उम्मेदवार भन्दा पनि आफ्नो रुचीको उम्मेदवारको रुपमा लिएको थियो । र त्यतिखेर मधेसकेन्द्रित पार्टीहरुले उपरास्ट्रपतिको माग नै गरेका थिएनन् । म आफैँ त्यो कमिटिमा थिएँ, त्यतिखेर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले यदि माओवादीले रामराजा प्रसाद सिंहलाई माओवादीको उम्मेदवार बनायो भने मोर्चाले रामराजाप्रसादलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तो निर्णयका पनि केहि कारणहरु थिए । पहिलो उहाँ मधेसी हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो गणतन्त्रवादी र तेस्रोमा इमान्दार । यी कारण रामराजाप्रसाद सिंहलाई मधेसी मोर्चाले माओवादीको उम्मेदवार भन्दा पनि आफ्नो चाहनाको उम्मेदवारको रुपमा लियो । र माओवादीको पनि मधेसी मोर्चाले समर्थन गरेको अवस्थामा रामराजप्रसाद सिंह राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ भने ठम्याइ थियो । रामराजाप्रसाद सिंह राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हुनेभएपछि माओवादीले शान्ता श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपतिको रुपमा अघि सारेको हो । त्यसबारे उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थठाकुर तीन घटक रामराजा र शान्ता श्रेष्ठको पक्षमा मतदान गर्न सहमत थिए । तर त्यो सहमतिलाई अचानक बदलेर उपेन्द्र यादवले एमालेको संसदीय दलमा गएर कांग्रेस र एमालेसँग नयाँ सहमति गरे । जुन सहमति अनुसार राष्ट्रपतिमा रामवरणलाई सघाउने सहमति भयो ।
उपेन्द्र यादवको त्यो सहमतिलाई लिएर मधेसी मोर्चामा मत भिन्नता भयो । र राष्ट्रपति निर्वाचनमा फोरम नेपालले औपचारिक रुपमा रामवरण यादवलाई समर्थन गरे तर १३÷१४ सभासदले रामवरणलाई भोट हालेनन् । तमलोपा र सद्भावनाले पनि रामवरणलाई भोट नहालेर रामराजालाई मत दिए । तसर्थ मधेसी पार्टीहरुले उपराष्ट्रपति मागेका थिए, माओवादीले शान्ता श्रेष्ठलाई अघि साह्रो, त्यसकारण मधेसी पार्टीहरुलाई धोका भयो भन्ने सत्य होईन । धोका उपेन्द्र यादवले दिए ।
उपेन्द्रको अराजनैतिक कदम र राष्टपति निर्वाचनको खेल
रामराजाप्रसाद सिंह गणतन्त्रवादी । उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउँदा गणतन्त्र नेपाल स्थिरतातर्फ जाने चिन्ता केहि विदेशी शक्तिलाई थियो । त्यसका विरुद्धमा रामवरणलाई राष्ट्रपति बनाउने खेल सुरुभयो, त्यो खेलमा मधेसकेन्द्रित पार्टीहरु प्रयोग भए । जसले प्रयोग गरेपनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरु प्रयोग भएका हुन् ।
उता राष्ट्रपतिमा रामवरणलाई समर्थन गर्नेगरि संयुक्त विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेका उपेन्द्र यादव त्यसको महिनादिन पनि नवित्दै सरकार निर्माणमा प्रचण्डलाई सहयोग गर्न पुगे र माओवादीसँग सहकार्यको कागजपत्रमा सहि गरे । यस कुरामा पनि मधेसी पार्टीहरुमा विभाजन आयो । फोरम नेपाल त्यो सरकारमा गयो । तमलोपा र सद्भावना त्यो सरकारमा गएनन् । यो एउटा नाटकिय परिवर्तन थियो ।
अर्कातिर माधबकुमार नेतृत्वको सरकारमा विजयकुमार पार्टीमा निर्णय नै नगराई सरकारमा हर्ताकर्ता हुन पुगे । र त्यसअघि माओवादी सरकारमा नगएका मधेसी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोले नयाँ गठबन्धन गरे र फोरम नेपालाई बाहिर राखे । माधब नेपालको सरकार ढलेपछिको झलनाथ खनाल सरकारमा विजयकुमार, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महत गएनन्, माओवादी र उपेन्द्र यादव गए । त्यसको धेरैपछि सबै मधेसवादी पार्टी मिलेर बाबुराम भट्टराइ सरकार बनाइयो तर त्यसमा उपेन्द्र यादव गएनन् ।
मैले भन्न खोजेको सरकारमा सहभागि हुने, फुट्ने र संसदभित्रको निर्वाचनमा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरामा नेपालका कुनैपनि दलहरु स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन् । प्रचण्ड सरकारमा तमलोप, सद्भावना नजानु, तर फोरम नेपाल जानु, माधवसरकार जाँदा तमलोपा, सद्भावना जानु र फोरम नेपाल फुटाएर गच्छदार त्यो सरकारको हर्तकर्ता बन्नु र उपेन्द्र यादवको फोरम नेपाल नजानु । यी सबै खेल आफैँमा स्वतन्त्र खेल होईनन । यी खेलका पछाडि अन्तराष्ट्रिय चासो छ । यस्तो प्रभाव कांग्रेस एमाले र माओवादीमा प¥यो भने मधेसी दलहरुमा पनि पर्यो ।
मेरो अनुभवमा नेपालको कुनै पनि निर्णय छैन, जुन नेपालीहरुले मात्र गरेको स्वतन्त्र निर्णय होस् । हरेक सरकारको निर्माणमा कुनै न कुनै रुपमा बैदेशिक चाहनाहरु अभिव्यक्त हुने गरेको थिए र भएका छन् । राष्टपति निर्वाचननमा पनि ती हर्कतहरु भएका थिए । रामवरण यादव कुनै विलक्क्षण प्रतिभा भएका व्यक्ति होईनन् । रामराजालाई राष्ट्रपति बनाउन नदिने खेलमा कांग्रेसद्धारा रामवरण यादवको नाम अघि सारेको हो । सायद गिरिजालाई राष्ट्रपतिको रुपमा नस्वीकारेपछि कोईरालाले त्यसको जवाफ दिएका थिए ।